काठमाडौं, २४ असार । २२ गते बिहान कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु पुगे । देउवा निवासमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु पनि उपस्थित थिए ।
करिब एक घण्टा बसेकोे बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट देउवाका अतिरिक्त बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, बिमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए भने जसपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र महतो सहभागी थिए ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद चरमचुलीमा पुगेको बेला ओली–देउवाको बाक्लिँदो भेटघाट, नेकपा फुट्न सक्ने र नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्ने हल्लाबीच यो बैठकप्रतिको जिज्ञासा बढेको थियो । बैठकको प्रारम्भमा देउवाले तिनै विषयमा प्रष्ट्याएका थिए ।
‘मेरै साथीहरुले मलाई शंका गर्न थाल्नु भाको छ । मैले ओलीलाई भित्रभित्रै कुनै वचन दिएँ कि भनेर । वास्तवमा मैले त्यस्तो वचन केही दिएको छैन ।’
उनले सुवास नेम्वाङसँगको कुराकानीबारे पनि स्पष्ट पारे । ‘सुवास नेम्बाङ अर्के सन्दर्भमा भेट्न आएका थिए । उनले संवैधानिक परिषदको बैठक र अख्तियारमा आयुक्तहरुको नियुक्तिको वातावररण बनाउनु पर्‍यो भनेका थिए । उनीहरु कुनै टुंगोमा नपुगुन्जेलसम्म हामी नेकपाको विवादभित्र किन फस्ने ?’ देउवाको सामान्य ब्रिफिङ यस्तो थियो ।
देउवाको स्पष्टीकरणपछि जसपाका नेताहरु सरकारले संसद बैठक हठात् समाप्त गरेको तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा कांग्रेसले खासै कुरा नउठाएको किन होला ? भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
जसपाका नेताहरुले संसदमा तीन महत्वपूर्ण विजनेश नागरिकता विधेयक, निजामति कर्मचारी विधेयक र एमसीसी थाँँती रहेको बेला बिजनेश नभएको भन्दै बैठक हठात् समाप्त गर्न उचित थिएन भन्ने कुरा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी थिए ।
जसपाको यो दृष्टिकोणप्रति कांग्रेस नेताहरुले सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि नागरिकता ऐन संशोधन बिधेयकमाथि केहीबेर छलफल भएको थियो । नागरिक विधेयकबारे दुवै दलका नेताहरु सहमतिमा पुगेका थिए ।
‘हामीले भावनामा बगेर मात्र हुँदैन, हजारौं हजार वर्षको व्यवहारिक यथार्थ पनि हेर्नुपर्छ । ७ वर्ष धेरै हुन्छ । त्यसले थुप्रै जटिलता ल्याउँछ ।’ दुवै पार्टीका नेतामा यस्तो धारणा देखिएको थियो ।
‘हामीले बढ्दो भूराजनीतिक जटिलताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर, यस बिषयमा लामो छलफल भएन, कुनै निष्कर्ष पनि निकालिएन,’ कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए ।
अर्को बिषय कोराना महामारी र यसबारे ओली सरकारको कार्यशैलीबारे थियो । ‘यसरी कसरी होला, यसरी त नेपालको बेहाल हुन्छ । ओलीजी अरुको कुरा पनि सुन्दैनन, आफू भाँती पुर्‍याएर काम पनि गर्दैनन, के गर्ने होला ?’ दुवै पार्टीका नेताहरुले कोराना प्रतिरोधमा ओली सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाले पनि अब के गर्ने भन्ने कुनै निष्कर्ष बनाउन सकेनन् ।
जसपा नेताहरुले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक बेलैमा पास नहुँदा प्रदेश सरकारहरुले राम्ररी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न र प्रभावकारी काम गर्न नपाएको कुरा समेत उठाएका थिए । तर कांग्रेसले यो बिषयमा खासै रुचि देखाएन । कुनै पनि प्रदेशमा कांग्रेसको सरकार नभएको हुँदा यसको गम्भीरताले कांग्रेसका नेताहरुलाई खासै छोएन ।
अन्ततः कुनै निष्कर्ष विना आवश्यकता अनुरुप फेरि छलफल गर्न सकिने भन्दै बैठक सकिएको थियो ।